1. iTunes Njikwa Ịkekọrịta
2. iTunes Home Ịkekọrịta
iTunes Home Ịkekọrịta atụmatụ, ẹkenam na ntọhapụ nke iTunes 9, na-enyere iTunes Media Library na-akọrọ n'etiti elu ise kọmputa ejikọrọ site Home Wi-Fi ma ọ bụ Ethernet Network. Ọ nwekwara ike enuba ndị Media Libraries na iDevice ma ọ bụ Apple TV. Ọ nwere ike na-akpaghị aka na nyefee ọhụrụ zụrụ music, nkiri, ngwa ọdịnala, akwụkwọ, na tiivi n'etiti ndị na kọmputa. Na iTunes Home Ịkekọrịta, i nwere ike ịkọrọ iTunes video, music, nkiri, ngwa, akwụkwọ, TV na-egosi, foto, wdg
Part 1. Gịnị bụ uru na ọghọm dị n'ime iTunes Home Ịkekọrịta Part 2. Olee otú iji Mbido iTunes Home Ịkekọrịta Part 3. Kwado Automatic Nyefee nke Media Files Part 4. Zere oyiri File Site na ndị ọzọ Computers Part 5. Mee Up iTunes Home Ịkekọrịta on Apple TV Part 6. Set Up Home Ịkekọrịta on iDevice Part 7. Gịnị iTunes Home Ịkekọrịta Falls Short Part 8. 5 Kasị-jụrụ nsogbu na iTunes Home Ịkekọrịta Part 9. iTunes Home Ịkekọrịta vs. iTunes File Ịkekọrịta
Part 1. Gịnị bụ uru na ọghọm dị n'ime iTunes Home Ịkekọrịta
Uru nke iTunes Home Ịkekọrịta
1. Share music, nkiri, ngwa, akwụkwọ, na tiivi, na photos.
2. akpaghị aka nyefee zụrụ media faịlụ ka na-akọrọ kọmputa.
3. Stream media faịlụ na-akọrọ n'etiti kọmputa na-iDevice ma ọ bụ Apple TV (2nd ọgbọ na n'elu).
Ụkọ ihe ụfọdụ nke iTunes Home Ịkekọrịta
Apụghị nyefee metadata.
Apụghị ego maka oyiri media faịlụ mgbe aka na-ebufe ọdịnaya n'etiti kọmputa.
Mmelite apụghị-agafere n'etiti kọmputa.
Part 2. Olee otú iji Mbido iTunes Home Ịkekọrịta
Dịkarịa ala abụọ na kọmputa - Mac ma ọ bụ Windows. Ị nwere ike n'ụlọ na-ekere òkè na elu ise kọmputa na otu Apple ID.
Otu Apple ID.
Ọhụrụ version nke iTunes. Ị nwere ike ibudata ọhụrụ version nke iTunes si Apple si ukara website.
Wi-Fi ma ọ bụ Ethernet netwọk na-arụsi ọrụ ike Njikọ Ịntanetị.
Otu iDevice kwesịrị na-agba ọsọ iOS 4.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Mee Up Home Ịkekọrịta On Computers
Nzọụkwụ 1: Wụnye ọhụrụ version nke iTunes na ẹkedori ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2: Mee ọ rụọ ọrụ Home Ịkekọrịta si iTunes File menu. Họrọ File> Home Ịkekọrịta> Tụgharịa na Home Ịkekọrịta. N'ihi na iTunes version 10.7 ma ọ bụ tupu họrọ Advanced> Tụgharịa na Home Ịkekọrịta.
I nwekwara ike gbanye Home Ịkekọrịta site na-ahọpụta Home Ịkekọrịta na-akọrọ ngalaba nke Left sidebar.
Cheta na: Ọ bụrụ na ekpe sidebar adịghị anya, ị nwere ike pịa View> Gosi sidebar.
Nzọụkwụ 3: Tinye Apple ID ma Paswọdu n'akụkụ aka nri nke na peeji nke kpọrọ dị ka Tinye Apple ID eji ike gị Home Share. Mkpa ka ị na-eji otu Apple ID na niile kọmputa ị chọrọ inwe ike Home Ịkekọrịta.
Nzọụkwụ 4: Pịa na Turn On Home Ịkekọrịta. iTunes ga nyochaa njirimara gị Apple ID na ọ bụrụ na ID bụ nti-esonụ na ihuenyo ga-apụta.
Nzọụkwụ 5: Pịa na Emela. Ozugbo i nwere pịa mere, ị ga-agaghịkwa enwe ike ịhụ Home Ịkekọrịta na-akọrọ ngalaba nke ekpe sidebar ruo mgbe ọ na-achọpụta rụọ ọzọ na kọmputa na Home Ịkekọrịta nyeere.
Nzọụkwụ 6: Megharịa nzọụkwụ 1 na 5 na bụla kọmputa amasị gị nwee iTunes Home Ịkekọrịta. Ọ bụrụ na ị ọma nyeere Home Ịkekọrịta na bụla na kọmputa site na iji otu Apple ID, ị pụrụ ịhụ na kọmputa na-akọrọ ngalaba dị ka n'okpuru:
Part 3. Kwado Automatic Nyefee nke Media Files
Aka akpaka nyefe nke Media Files biko soro n'okpuru nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: Pịa na Ntọala ... button na ala n'akụkụ aka nri nke na peeji nke mgbe ị na-elele ọdịnaya nke a na kọmputa n'ime Home Share.
Nzọụkwụ 2: Site ọzọ ihuenyo họrọ nke ụdị faịlụ na ị chọrọ inwe ike akpaka transfer na pịa Ok.
Part 4. Zere oyiri File Site na ndị ọzọ ComputersFiles
Iji zere oyiri faịlụ site ọzọ kọmputa si egosi na ahụ ndepụta eso n'okpuru nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: Pịa na Gosi menu emi odude ke ala-n'aka ekpe nke page.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Ihe bụghị na m n'ọbá akwụkwọ si ndepụta tupu ebufe ọ bụla faịlụ.
Part 5. Mee Up iTunes Home Ịkekọrịta on Apple TV
Ka anyị hụ kwụpụ site nzọụkwụ na-esi nwee Home Ịkekọrịta on Apple TV 2nd na 3rd n'ọgbọ.
Nzọụkwụ 1: On Apple TV họrọ Computers.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Ee aka Home Ịkekọrịta na iji Apple ID.
Nzọụkwụ 3: Na-esote ihuenyo ị ga-ahụ Home Ịkekọrịta e nyeere a Apple TV.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, gị Apple TV ga-akpaghị aka ịchọpụta kọmputa na Home Ịkekọrịta nyeere na otu Apple ID.
Part 6. Mee Up Home Ịkekọrịta on iDevice
Aka Home Ịkekọrịta na gị iPhone, iPad na iPod nwere iOS 4.3 ma ọ bụ n'elu eso ndị a:
Nzọụkwụ 1: pịa Ntọala wee họrọ Music ma ọ bụ Video aka Home Ịkekọrịta. A ga-enyere Home Ịkekọrịta ma ụdị ọdịnaya.
Nzọụkwụ 2: Tinye Apple ID na paswọọdụ. Na-eji otu Apple ID na ị na-eji aka Home Ịkekọrịta na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: Ka ịkpọọ egwu ma ọ bụ video na gị iPhone na iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị enweta ma Music ma ọ bụ Videos> More ...> nnwekọrịta. Ọ bụrụ na ị na-eji mbụ version nke iOS enweta iPod> More ...> nnwekọrịta.
Nzọụkwụ 4: Ugbu a, họrọ a na-akọrọ n'ọbá akwụkwọ na-egwu egwu ma ọ bụ vidiyo si na na.
Nzọụkwụ 5: Ka ịkpọọ egwu ma ọ bụ video na gị iPad ma ọ bụ iPod Touch na mbụ version nke iOS 5, enweta iPod> Library na họrọ a na-akọrọ n'ọbá akwụkwọ na-egwu na.
Part 7. Gịnị iTunes Home Ịkekọrịta Falls Short
1. Iji mee ka Home Ịkekọrịta n'etiti otutu kọmputa niile kọmputa ga-n'ime otu Network.
2. Ka ịmepụta Home Ịkekọrịta niile kọmputa ga-nyeere na otu Apple ID.
3. na otu Apple ID ruo ise kọmputa nwere ike ada n'ime Home Ịkekọrịta netwọk.
4. Mkpa iOS 4.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị aka Home Ịkekọrịta on iDevice.
5. Home Ịkekọrịta apụghị nyefee ma ọ bụ iyi audiobook ọdịnaya zụrụ Audible.com.
Part 8. 5 Kasị-jụrụ nsogbu na iTunes Home Ịkekọrịta
Q1. Home Ịkekọrịta-adịghị arụ ọrụ mgbe mwube Home Ịkekọrịta
1. Lelee gị netwọk njikọ
2. Lelee kọmputa firewall ntọala
3. Tulee Antivirus ntọala
4. Tulee Ọ bụrụ na kọmputa abụghị na-ehi ụra mode.
Q2. Home Ịkekọrịta na-adịghị arụ ọrụ na iOS ngwaọrụ mgbe emelite OS X ma ọ bụ iTunes
Ngwọta: Mgbe OS X ma ọ bụ iTunes a na-emelite Home nkekọrịta ịrịba ama si na Apple ID ji kee Home Ịkekọrịta. Ya mere, na-eme na Home Ịkekọrịta ọzọ na iji Apple ID ga-edozi nke.
Q3. Home Ịkekọrịta nwere ike na-arụ ọrụ mgbe kwalite ka iOS 7 na windows
Mgbe iTunes ebudatara, a ọrụ akpọ Bonjour Service na-ebudatara. Ọ na-ekwe ime ngwa ọdịnala na òkè ọba akwụkwọ na-eji na Home Ịkekọrịta. Ego ma ọ bụrụ na ọrụ na-agba ọsọ na gị windows.
1. Control Panel> Nlekọta Ngwaọrụ> Ọrụ.
2. Họrọ Bonjour Service na ego ọnọdụ nke ọrụ a.
3. Ọ bụrụ na ọnọdụ na-Kwụsịrị-amalite ọrụ site na nri ịpị na ọrụ na-ahọpụta mmalite.
4. Malitegharịa ekwentị iTunes.
Q4. Home Ịkekọrịta nwere ike na-arụ ọrụ mgbe IPv6 na-nyeere
Ngwọta: Gbanyụọ IPv6 na Malitegharịa ekwentị iTunes.
Q5. Apụghị jikọọ a kọmputa mgbe ọ bụ na-ehi ụra mode
Ngwọta: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na kọmputa dị mgbe ọ bụ na-ehi ụra mode emeghe System Mmasị> Energy nchekwa na-enyere "Tetanụ maka netwọk ohere" nhọrọ.
Part 9. iTunes Home Ịkekọrịta vs. iTunes File Ịkekọrịta
iTunes Home Ịkekọrịta
iTunes File Ịkekọrịta
Na-enye ohere media n'ọbá akwụkwọ na-akọrọ n'etiti otutu kọmputa Na-enye ohere faịlụ jikọtara na ngwa na iDevice nyefee si iDevice na kọmputa
Chọrọ otu Apple ID aka n'ụlọ nkekọrịta Ọ dịghị Apple ID chọrọ nyefee faịlụ
Mkpa Home Wi-Fi ma ọ bụ Ethernet Njikọ Faịlụ nkekọrịta-arụ ọrụ na USB
Apụghị nyefee Metadata Na-echebe niile Metadata
Ruo ise kọmputa nwere ike ada n'ime n'ụlọ nkekọrịta Ọ dịghị otú ahụ ịgba
A Full Okwu Mmalite banyere iTunes U
Copy Music si iPhone ka iTunes
2 Ụzọ Detuo iPhone listi ọkpụkpọ iji iTunes
Bugharịa iTunes Playlist ka iPhone na Enweghị Loss
Top 3 iTunes Alternative ka Android
Top 7 iTunes-dị ka ngwa ọdịnala n'ihi Android
Bugharịa iTunes zụrụ iPhone
iTunes maka Android nyefee Files
1 Pịa nyefee faịlụ si gam akporo ka iPhone
Otú nyefee Music si Mac ka iPhone & si iPhone ka Mac
> Resource> iTunes> A Full Nduzi na Olee otú Jiri iTunes Home Ịkekọrịta